Suugaantan culus su'aasha wadata ee ustaad Adam Increase tolow jawaab ma loo heleyaa ?
07 September, 2013 in English News by
Ustaad Adam Increase oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed aqoonyahanimadiisuna ku darsaday suugaanta Hodanka ah ee Soomaaliyeed waxaa uu halkan idin kugu soo gudbineyaa suugaan miisaan leh oo su'aalo wata taasoo weedheedi walbaba su'aal ku sidqeys
Ustaad Adam Increase oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed aqoonyahanimadiisuna ku darsaday suugaanta Hodanka ah ee Soomaaliyeed waxaa uu halkan idin kugu soo gudbineyaa suugaan miisaan leh oo su'aalo wata taasoo weedheedi walbaba su'aal ku sidqeysan kuna socota shucuubta dagta una nasabka sheegta 6 da gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya su'aashuse waxay tahay suugaantaan iska soo socota ee Ustad Adam tolow jawaab ma loo heli doonaa ayaase ka jawaabi doona ?
Maxaa cirka caadka daba-dhigay ? Maxaa caadka daruuraha daba-dhigay ? Maxaa daruuraha roobka daba-dhigay ? Maxaa roobka rayska daba-dhigay ? Maxaa rayska doogga daba-dhigay ? Maxaa doogga xoolaha daba-dhigay ? Maxaa xoolaha caanaha daba-dhigay ? Maxaa caanaha subagga daba-dhigay ? Maxaa subagga dumarka daba-dhigay ? Maxaa ragga dumarka daba-dhigay ? Maxaa ummadda Koonfur Galbeedna aayaheeda Culusow iyo Axmed Madoobe daba-dhigay ?
Ilhan Cumar oo Jawaab adag siisay Madaxweyne Donald Trump
Sirdoonka Qaranka oo loo Jeediyey Eedeyn culus
Xildhibaan Geesey" Farmaajo Dastuur Iyo Diinta Waa Diiday" & Arima Kale Oo Culus
Axmed Madobe Oo Ku Dhawaaqay Dagaal Culus
Xildhibaan Cabdixakiim oo eedeeyay culus u jeediyay Madxda DF!!
Xildhibaanada Golaha Shacabka oo loo qeybin doono laalush ,XOG CULUS!
Donald Trump oo digniin culus u diray Suxufiyiinta Aqalka Cad
Ethiopia oo Wiil Adeer Uyahay Xildhibaan Ibraahim Yerow Baydhabo Ku Dishey Visits: 139
Kenya oo Sharuudo Ku xirtay Soomaaliya Visits: 33
Shabaab oo sheegatay Masuuliyada dil saakay Afgooye Visits: 35